PHP အတွက် AMP Plugin - ဒေါင်းလုပ် & လမ်းညွှန်ချက်များ - MY
PHP AMP Plugin - ဒေါင်းလုဒ်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ
AMP for PHP plugin ဖြင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် Google AMP စာမျက်နှာများကိုအလွယ်တကူအလိုအလျောက်အလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်သည်။
သင်၏ PHP ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမိုဘိုင်းပစ္စည်းများနှင့်သင်၏ Google AMPHTML ဗားရှင်းကိုသင်၏စာမျက်နှာတိုင်းအတွက်ပရိုဂရမ်ရေးစရာမလိုပဲ Google Mobile First Index အတွက်ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ။
စမ်းသပ်ကြည့်ပါ၊ တပ်ဆင်ပါ။ Activate လုပ်ပါ။ ပြီးပါပြီ။
AMP PHP plugin ကိုထည့်ပါ
PHP-AMP ပလပ်အင်ကို မထည့်သွင်းမီ အကြံပြုချက်- အချို့သော CMS ဖြေရှင်းချက်များအတွက် amp-cloud.de သည် တပ်ဆင်ရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရန် ပို၍လွယ်ကူသည့် အထူး Google AMP plug-in များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ - "AMP for PHP plug-in" ၏ အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် ၊ အောက်ပါ Google AMP ပလပ်အင်များထဲမှ တစ်ခုသည် သင့်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်-
WordPress AMP plugin ကိုထည့်ပါ
Blogger.com AMP ဝစ်ဂျက်ကို ထည့်သွင်းပါ။
အဆင့်- 1- "PHP Plugin အတွက် AMP" ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
လက်ရှိ AMP for PHP Plugin version ကိုအောက်ပါ download link မှ ZIP ဖိုင်တစ်ခုအဖြစ် download လုပ်ပါ။ - ZIP ဖိုင်တွင် AMP ပလပ်အင်ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောဖိုင်များပါ ၀ င်သော“ amp” ဖိုလ်ဒါတစ်ခုပါရှိသည်။
ဒေါင်းလုပ်: PHP plugin အတွက် AMP (6,18 KB)
အဆင့်-2- "AMP for PHP Plugin" -ZIP-file ကို ဖြည်ပါ။
download လုပ်ထားသော ZIP ဖိုင်ကို Unzip / extract လုပ်ပါ။
ထုပ်ပိုးခြင်း/ဖြည်ထုတ်ပြီးနောက်တွင် PHP-AMP plug-in ဖိုင်များတည်ရှိနေသည့် "/amp/" အမည်ဖြင့် "ဖိုင်တွဲ" ရှိသင့်ပါသည်။
အဆင့် ၃ - PHP plugin ဖိုင်များကိုဝက်ဘ်ဆာဗာတွင်သိမ်းပါ
အောက်ပါ URL အောက်ရှိသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရောက်ရှိရန်အတွက် "/ amp /" အမည်ဖြင့်သင်၏ unzipped ဖိုင်တွဲကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆာဗာ၏ပင်ရင်းလမ်းညွှန်သို့တင်ပါ။
ဖိုင်တွဲကိုသင်၏ web server ပေါ်တွင်မှန်ကန်စွာသိုလှောင်ထားခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်ရန်အောက်ပါ URL ကိုခေါ်လိုက်ပါ၊ တပ်ဆင်မှုမှန်ကန်လျှင်၊ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည် amp-cloud.de မှ AMP plug-in ကိုသုံးသည်ဟူသောသတင်းစကားကိုတွေ့သင့်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် plugin ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မတပ်ဆင်ထားရင်မင်းအထက်ပါအဆင့်တွေကိုထပ်ပြီးသွားသင့်တယ်။
(ဟုတ်ပါတယ်၊ www.yourdomain.de ကိုသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာနဲ့အစားထိုးရမယ်)
အဆင့် -၄: AMPHTML tag ကိုထည့်ပါ။
သက်ဆိုင်ရာအခြေစိုက်စခန်း၏ <head> section မှာတစ်နေ့ - နောက်ဆုံးမှာ, သင် amp ဗားရှင်းများကိုလုပ်ချင်သောအဘို့, တစ်ဦးချင်းစီအခြေစိုက်စခန်းတွန်းအားပေးအောက်ပါတို့မှတဦးတည်းကိုအသုံးပြုပြီးပါဝင်သည်တစ် <link ကို rel = "amphtml"> variants ။
<link rel = "amphtml" href="http:// www.DeineDomain.de /amp/amp.php?url= IhrArtikelURL " />
အကယ်၍ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် HTTPS ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက "http: //" အပိုင်း ကို "https: //" ဖြင့်အစားထိုးပါ
သင်၏စာမူ URL အပိုင်းကို AMPHTML tag (“ http: //” သို့မဟုတ်“ https: //”) ပါသည့်သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာခွဲ ၏ UTF8 encoded URL ဖြင့်အစားထိုးပါ။
URL ကိုသင့်လျော်စွာ encoding လုပ်ရန်အတွက်ဥပမာ https://www.url-encode-online.rocks/ တွင်အောက်ပါ online URL encoder ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
UTF-8 encoded URL ဥပမာတစ်ခု။
https% 3A% 2F% 2Fwww.DeineDomain.de% 2FDeinPfad% 2FDeineDatei.php% 3Fparameter% 3DS% C3% ဘီစီ% C3% 9F% 26sprache% 3DDE
UTF-8 ကုဒ်နံပါတ် URL အတွက်ဥပမာ -
မူကွဲ ၂ -
<link rel="amphtml" href=" http:// ".$_SERVER['HTTP_HOST']."/amp/amp.php?url=".urlencode(" http:// ".$_SERVER[ 'HTTP_HOST']. $_ SERVER [' PHP_SELF ']. "?". $_ SERVER ['QUERY_STRING ']."")"" />
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ HTTPS ကိုအသုံးပြုပါက "http: //" အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကို "https: //" ဖြင့် အစားထိုးပါ။
AMP PHP ကုဒ်ဥပမာ
<?php echo " <!DOCTYPE html> <html> <head> <title> မင်းရဲ့ meta ခေါင်းစဉ်... </title> <link rel="amphtml" href="https://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/amp/amp.php?url=".urlencode("https://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF']."?".$_SERVER['QUERY_STRING']."")."" /> </head> <body> မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းမြစ်ကုဒ် ... </body> </html> ;" ?>
ဘာကြောင့် AMP PHP plugin ကိုသုံးရသလဲ။
amp-cloud.de မှ PHP plugin အတွက်တရားဝင် AMP သည် Google ၏ AMP host လမ်းညွှန်ချက်များအရ အကြံပြုသည့်အတိုင်းသင်၏ကိုယ်ပိုင် PHP ကွန်ရက်စာမျက်နှာများပေါ်ရှိ Accelerated Mobile Pages (AMP) ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင် host အောက်တွင် activate လုပ်သည်။